गुराँसेमा चम्किइन् माेडल तारा - Paschimnepal.com
गुराँसेमा चम्किइन् माेडल तारा
सुर्खेत । बर्दियाका गेरुवा गाउँपालिका-५ गाेविनपुरमा जन्मिएकी माेडल तारा बुढा उमेरले २० वर्षकी भइन् । सानैदेखी नृत्यमा रुचि राख्ने बुढा छोटो समयमै आफुलाई मोडलिङमा स्थापित भइसकेकी छन् ।
मध्यपश्चिम क्याम्पस नेपालगञ्ज विएडमा अध्ययनरत ताराले तीन अाेटा म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी छन् । पढाईको सिलशिलामा नेपालगंज अाएछि तारा मोडलिङ क्षेत्रमा आफुलाई चिनाउन म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गर्न थालेकी हुन् । १ वर्षमा उनले तीन वटा गीतमा अभिनय गरिसकेकी छन् ।
बर्दियामा स्कुले जीवनमा पनि सानैदेखी डान्स गर्ने तथा गाउँको कार्यक्रममा उत्कृष्ट नाच देखाएर पुरस्कृत समेत भईसकेकी छिन् । कृष्णसार एफएममा यूथ फोरम कार्यक्रममा सहभागी भएपछि म्यूजिक भिडियोमा मोडलिङ गर्न थालेको तारा बताउँछिन् ।
यूथ फोरममा आफुले प्रतिभा देखाएपछि भिडियो गर्ने अवसर प्रमोद डिजीसरले जुराएको उनी बताउँछिन् । ‘म्यूजिक भिडियोमा खेल्ने सानैदेखी ईन्छा थियो’ तारा भन्छिन् ः ‘नेपालगंज आएपछि त्यो ईच्छा पुरा भयो ।’
सुरुमा क्यामराको अगाडी खुलेर डान्स तथा अभिनय गर्न निकै गाह्रो भएको अनुभव छ तारासंग । विस्तारै अभिनय गर्दा पछि निकै सहज भयो । अहिले अभिनय र नाचमा ढुक्क आफुले प्रस्तुती देखाउने गरेको मोडलिङमा सक्रिय तारा बताउँछिन् ।
बर्दियामा हुने कार्यक्रमदेखी अहिलेसम्म घरपरिवारले आफुलाई सहयोग गरिरहेको ताराको भनाई छ । उनले ¥याक ग¥यो…. बोलको गित म्यूजिक भिडियो गरिन् । त्यहाँ कलेज उमेरमा मायाँ प्रेम झल्कने अभिनय थियो ।
नयाँ विद्यार्थीलाई क्याप्पसमा जिस्काउने चलन, केटाकेटीविच हुने मायालाई देखाईएको छ । पछिल्लो पटक अन्जु पन्तको ..म त अध्यारोमा बाँचिरहेको …. गीतमा अभिनय ताराले गरिन् ।
नृत्य निर्देशक नवराज सुवेदीले गरेको उक्त गितमा ताराले खुलेरै अभिनय गरेकी छिन् । अहिले यूटुवमा निकै भईरल भईरहेको छ । आफु अव, निरन्तर म्यूजिक भिडियोमा लागिरहने ताराको सोच रहेको छ ।
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, पुस २२, २०७६ 6:56:54 PM
Prevकलाकारितामा जमेका नवराज
Nextगुराँसेमा दोस्रो पटक हिमपात, साँझदेखी वर्षा कम हुने प्रक्षेपण